Isitshudeni sezobudokotela sase-UKZN uMnu u-Clement Agoni.
Umfundi owenza iziqu zobudokotela kwezeSayensi yezeMpilo uMnu u-Clement Agoni usanda kuqokwa ukuba abe yilungu le-11 lekomidi lezokuhlela le-COVID-19 le-Global Shapers Community, okungumkhankaso owaqalwa i-World Economic Forum ngonyaka wezi-2011.
U-Agoni ukhethelwe amagalelo akhe amqoka kulo mkhakha ngokuhola uhlaka lomphakathi waseThekwini ngokuhola umkhankaso we-COVID-19 obizwa nge-ShapersCare esekwa ngabalingani bendawo lapho kwabiwa khona izijumbana zokudla ebantwini abantulayo ngesikhathi somvalelandlini.
‘Ukuqokelwa kwami ekomidini yinto enkulu kanti ngiyajabula, ikakhulu uma kubhekwa ukuthi mkhulu kangakanani umphakathi; unabantu abevile ezi-9 000 emazweni angama-145.
‘Ukuba ngumuntu omnyama wase-Afrika oyedwa kwababili abesekomidini nomlingani omele ababaleke kwamanye amazwe, emsebenzini wethu kukhona ukukhuthaza, ukweseka nokuhlanganisa umsebenzi we-Shapers Community we-COVID-19, ikakhulu imikhankaso eholwa yizikhungo zase-Afrika. Loku kuzoba ngaphezu komsebenzi wekomidi wonke.’
I-ShapersCare isanda kuhlonishwa ngokuba ngukuphela komkhankaso oyingxenye yemihlanu eseqhulwini yokulwa ne-COVID-19 emhlabeni, yahlonishwa nangamagalelo ayo.
IKomidi elihlelayo lamalungu angama-11, elibekwe unyaka, lizobhekana nokuthuthukisa amakhono, ulwazi nobuchule i-Global Shapers ukuze ikwazi ukubhekana ne-COVID-19 ngendlela efanele.
Kusukela aba yilungu laseThekwini u-Agoni uhole ithimba lezempilo ekufinyeleleni eMlaza nemikhankaso yokufundisa ngezempilo zomqondo ezikoleni zamabanga aphezulu kuleli lokishi.
U-Agoni, namanye amalungu, bazogqugquzela i-Global Shapers ukuthi isukume yenze okubonakalayo emazingeni edolobha, izwe nomhlaba ibe iqinisekisa ukuthi izwi labantu abasha liyazwakala lapho kuhlelwa khona.
Ikomiti elihlelayo lizomela i-Global Shapers Community kwi-COVID Action Platform ye-World Economic Forum
U-Agoni, odabuka eGhana, wenza unyaka wesithathu ezifundweni zobudokotela, lapho eqeqeshwa khona nguSolwazi u-Mahmoud Soliman we-Discipline of Pharmaceutical Chemistry.
Ucwaningo lwakhe lugxile ekuxilongeni indlela imithi esebenza ngayo.
‘Kade ngakholwa ukuthi ukuqeqesha isifundiswa akupheleli ngaphakathi kwezindonga zegumbi lokufunda noma egunjini lokwenza ucwaningo kepha ukusebenza emphakathini kufanele kugcizelelwe ngoba kwenza abafundi bakwazi ukubona izinselelo, kuzenze zikwazi ukuzixazulula kangcono,’ kusho u-Agoni.
‘Umsebenzi wami ekomidini elihlelayo kungenze ngabona izinselelo ezithinta i-COVID-19 abantu basemazweni ehlukene ababhekene nazo nokuthi abantu abasha babhekana kanjani nalezi zinselelo. Nginesiqiniseko sokuthi imibono ehlukene namasiko ehlukene kuzongenza isifundiswa sezobudokotela esinozwelo ebantwini,’ kwengeza u-Agoni.